Nhoroondo yekambani - Fujian Bridge Style Midziyo Co, Ltd.
Fujian Bridge Style Furnishings Co., Ltd.i e-commerce yakanangisa BAMBOO uye WOOD zvigadzirwa zvevatengi zvigadzirwa nezvigadzirwa zve Bamboo & Wooden Cutting Board, Bamboo Drawer Organiser, Bamboo Charcuterie Cheese Board nezvimwe. Iyo kambani inopa zvigadzirwa zvayo kunyanya kune vatengesi veAmazon North America neEurope. Mushure memakore gumi ekuvandudza, fekitori rayo rizere rinofukidza 15000 mativi emamirimita uye rakasimbiswa neBSCI, FSC, ISO9001.
Kwemakore gumi apfuura, iyo yakasimba yemhando yekudzora sisitimu uye yakanakisa sevhisi inogonesa Fujian Bridge Style Furnishings Co, Ltd. kushandira vanopfuura 1000 vatengesi veAmazon uye chengetedza kwenguva refu uye inobatsira bhizimusi kubatana.
Inoenderera mberi nekuvandudza uye hunyanzvi, Fujian Bridge Style Furnishings Co, Ltd. rave rinozivikanwa uye rakavimbika mutengesi wemishenjere uye zvigadzirwa zvemuti muChina.
Kwemakore gumi apfuura, iyo yakasimba yemhando yekudzora sisitimu uye yakanakisa sevhisi inogonesa Fujian Bridge Style Furnishing Co, Ltd kushandira vanopfuura 1000 vatengesi veAmazon uye chengetedza kwenguva refu uye inobatsira bhizinesi mushandirapamwe.